Abenzi beGrisi, abahlinzeki - China Amafutha Factory
Petroking High Quality Temperature Grease HT for Heavy Truck Bearing
Umbala: DRAK BLUE
IDrop Point: 380
Ukusebenza Kwethempelesha Ibanga: -20-- 260
I-Petroking White Lithium Grease eneDrop Point 200 ℃
Isetshenziselwa kabanzi ukuthambisa amabhele kanye namagiya ezimoto zamaloli abembayo neminye imishini yezolimo neyokwakha nayo ingasetshenziswa kwezinye izingxenye nezingxenye ezidinga ukuthambisa njalonjalo.
Ibanga lokushisa lesicelo: -20 kuya ku-120ºC, i-150ºC esikhathini esifushane.
I-Petroking White Color Lithium Grease
I-PETOKING White Lithium Grease inguwoyela wamaminerali osuselwe, igrisi ye-lithium insipho eqine ngokuqina okuhle kokushisa ngaphakathi kobubanzi bayo bokushisa. Le khwalithi ye-premium, igrisi yenhloso ejwayelekile ilungele izinhlelo ezahlukahlukene zezimboni nezimoto.
Amafutha we-calcium anhydrous athuthukisiwe ukuthi asetshenziswe ngezinhlelo zokuthambisa ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi kuya kwamaphakathi. I-calcium thickener yayo engenayo i-anhydrous, ihlanganiswe ne-base base viscosity ephezulu, inikeza ukumelana okuhle kwamanzi nokunamathela ezindaweni kanye nezindawo ezinhle kakhulu zokulwa nokugqoka.
Ikhono elihle lokumpompa emazingeni okushisa aphansi kuya kwaphakathi.
Ukumelana namanzi okuhle nokuvikela ukugqwala.
Izakhiwo ezinhle kakhulu zokulwa nokugqoka.
Ukunamathela okuhle kakhulu ezindaweni.
I-Petroking Calcum Based Grease For Plastic Gears